Rut 2 Baịbụl Nsụgharị Ụwa Ọhụrụ nke Dị n'Ịntanet
2 E nwere onye ikwu+ di Neomi, nke bụ́ nwoke bara ezigbo ọgaranya,+ onye si n’ezinụlọ Elimelek, onye aha ya bụ Boaz.+
2 Ka oge na-aga, Rut, bụ́ nwaanyị Moab, sịrị Neomi: “Biko, ka m gaa n’ubi tụtụkọta oko ọka e wefọrọ ewefọ,+ m ga na-eso onye ọ bụla nke ihe m ga-amasị ya n’azụ.” O wee sị ya: “Gawa, nwa m.”
3 O wee gawa ma banye n’ubi, malitekwa ịtụtụkọta ọka e wefọrọ ewefọ, mgbe ndị na-ewe ihe ubi wechara.+ O wee daba na ọ banyere n’ubi Boaz,+ bụ́ onye si n’ezinụlọ Elimelek.+
4 Ma, lee! Boaz si na Betlehem bịa wee gwa ndị ahụ na-ewe ihe ubi, sị: “Ka Jehova nọnyere unu.”+ Ha wee zaa ya, sị: “Ka Jehova gọzie gị.”+
5 Boaz+ wee gwa nwa okorobịa o mere onyeisi ndị na-ewe ihe ubi, sị: “Ònye nwe nwa agbọghọ a?”
6 Nwa okorobịa ahụ o mere onyeisi ndị na-ewe ihe ubi wee zaa, sị: “Nwa agbọghọ a bụ nwaanyị Moab,+ bụ́ onye so Neomi si n’ala Moab lọta.+
7 O wee sị, ‘Biko, ka m si n’ọka ndị e gbuturu egbutu tụtụkọta ndị e wefọrọ ewefọ+ ma ndị na-ewe ihe ubi wechaa.’ O wee banye ma si n’oge ahụ n’ụtụtụ kwụgide ọtọ ruo ugbu a ọ nọdụtụrụ ala n’ụlọ.”+
8 E mesịa, Boaz sịrị Rut: “Nwa m, ọ̀ kwa ị nụla? Agala n’ubi onye ọzọ ịtụtụkọta ọka e wefọrọ ewefọ,+ esikwala n’ebe a pụọ, ka i wee nọrọ ụmụ agbọghọ m nso.+
9 Ka anya gị dị n’ubi ha ga-egbu ọka, gị na ha ga-esokwa. Enyela m ụmụ okorobịa ahụ iwu ka ha ghara imetụ gị aka.+ Mgbe akpịrị kpọwara gị nkụ, gaa n’ite mmiri ụmụ okorobịa ahụ gbanyere mmiri kuru mmiri ṅụọ.”+
10 O wee gbuo ikpere n’ala, kpudo ihu n’ala, kpọọ isiala+ wee sị ya: “Gịnị mere ihe m ji masị gị, nke mere anya gị ji rute n’ebe m nọ, ebe m bụ onye mba ọzọ?”+
11 Boaz wee zaa ya, sị: “A kọworo m+ ihe niile i meere nne di gị mgbe di gị nwụsịrị,+ na otú i si hapụ nna gị na nne gị nakwa ala ndị ikwu gị wee bịakwute ndị ị na-amabughị.+
12 Ka Jehova kwụọ gị ụgwọ dị ka omume gị si dị,+ ka Jehova bụ́ Chineke Izrel, onye ị gbabaworo n’okpuru nku ya,+ nye gị ụgwọ ọrụ zuru okè.”+
13 O wee sị: “Ka ihe m masị gị, onyenwe m, n’ihi na ị kasiwo m obi nakwa n’ihi na i kwuwo okwu mesiri ohu gị nwaanyị obi ike,+ ọ bụ ezie na mụ onwe m adịghị ka otu n’ime ndị inyom na-ejere gị ozi.”+
14 Boaz wee gwa ya n’oge ha na-eri nri, sị: “Bịa ebe a, were achịcha rie,+ surukwa achịcha gị n’ime mmanya.” O wee nọdụ ọdụ n’akụkụ ndị ahụ na-ewe ihe ubi, ya ana-enye ya ọka a ṅara n’ọkụ,+ o wee na-ata, o wee rijuo afọ, rifọkwa.
15 O wee bilie gaa ịtụtụkọta ọka e wefọrọ ewefọ.+ Boaz wee nye ụmụ okorobịa ya iwu, sị: “Unu hapụ ya ka o si n’ọka e gbuturu egbutu tụtụkọrọ ndị e wefọrọ ewefọ, unu emetụkwala ya aka.+
16 Hụkwanụ na unu dọpụtaara ya ọka ụfọdụ n’ùkwù ọka, hapụkwanụ ha ka ọ tụtụkọrọ ha,+ unu abakwarala ya mba.”
17 O wee na-atụtụkọta ọka e wefọrọ n’ubi ruo ná mgbede,+ mgbe o mesịrị, o tichara+ ihe ọ tụtụkọtara, o wee bụrụ ihe dị ka otu ihe ọ̀tụ̀tụ̀ efa+ ọka bali.
18 O wee buru ya banye n’obodo, nne di ya wee hụ ihe ọ tụtụkọtara. O wee wepụta nri ahụ o rifọrọ+ mgbe o rijuchara afọ wee nye ya.
19 Nne di ya wee sị ya: “Olee ebe ị gara tụtụkọta ihe taa, oleekwa ebe ị rụrụ ọrụ? Ka onye anya ya ruru n’ebe ị nọ bụrụ onye a gọziri agọzi.”+ O wee gwa nne di ya onye ọ rụrụ ọrụ n’ubi ya; o wee sị: “Aha onye m rụrụ ọrụ n’ubi ya taa bụ Boaz.”
20 Neomi wee sị nwunye nwa ya: “Ka Jehova, bụ́ onye na-ewepụghị obiọma*+ ya n’ebe ndị dị ndụ na ndị nwụrụ anwụ nọ,+ gọzie ya.”+ Neomi wee sị ya: “Nwoke ahụ bụ onye ikwu anyị.+ Ọ bụ otu n’ime ndị ga-agbara ihe anyị.”+
21 Rut nwaanyị Moab wee sị: “Ọ sịkwara m, ‘Nọrọ ụmụ ọrụ m nso ruo mgbe ha wesịrị ihe ubi m dum.’”+
22 Ya mere, Neomi+ gwara Rut nwunye nwa ya,+ sị: “Nwa m, ọ ka mma ka i soro ụmụ agbọghọ ya, ka a ghara ịkpasu gị iwe n’ubi onye ọzọ.”+
23 O wee na-anọ ụmụ agbọghọ Boaz nso, na-atụtụkọtakwa ọka e wefọrọ n’ubi ruo mgbe owuwe ihe ubi nke ọka bali+ na owuwe ihe ubi nke ọka wit gwụsịrị. Ya na nne di ya bikwa.+
^ Ru 2:20*
mailto:?body=Nọrọ Ebe A Gụọ Baịbụl%0a%0ahttps%3A%2F%2Fwww.jw.org%2Ffinder%3Fdocid%3D1011452%26Book%3D8%26Chapter%3D2%26wtlocale%3DIB%26srcid=share⊂ject=Nọrọ Ebe A Gụọ Baịbụl